Ogow: 9-ka Kulan Ee Ugu Xiisaha Baddan Ee Bishan September Qaarada Yurub Laga Ciyaarayo
HomeWararka MaantaOgow: 9-ka Kulan Ee Ugu Xiisaha Baddan Ee Bishan September Qaarada Yurub Laga Ciyaarayo
Iyadoo aan ku dhawaaneyno inay soo dhammaadaan kulamadda heerka caalami ee hakadka geliyay horyaalada Yurub, ciyaartoyda ayaa dib ugu laabanaya kooxahooda si ay isagu diyaariyaan kulamo culus oo horyaalkooda ah iyo sidoo kale soo laabashada xilli ciyaareedka Champions League.
Kulamo baddan ayaa la ciyaarayaa bishan September kuwaas oo ah kuwo xiiso leh, waxaana daah fur u ah kulanka Manchester Derby oo ay geesaha isgelin doonaan Jose Mourinho iyo Pep Guardiola.
Haddaba waxaan idiin soo gudbineynaa 9-kulan oo ay tahay inaad isha ku hayso bishan, meelna ku sii qoro maalmaha la ciyaarayo si aanay kuu seegin, waxaa ku jira kulamo horyaalka Premier League, La Liga iyo Serie A iyo weliba kulamo ka tirsan wareega Group-yadda ee Champions League.
Man United vs Man City (Sabti, 10ka September)
Dagaalka Manchester ayaa fursada bishan September. Old Trafford ayaa marti-gelin doonta iska horimaadkii ugu horeeyay ee Mourinho iyo Guardiola ee tan iyo markii ay qabteen shaqada labada kooxood, waxaana ay labada kooxood isku qabsan doonaan kooxdii hogaamin laheyd horyaalka. Chelsea iyo labada kooxood ee Manchester ayaa wada badiyay 3-dii kulan ee horyaalka. Haddaba maqnaanshiyaha Kun Aguero miyuu saacidi doonaa United..?.
PSG vs Arsenal (Salaas 13ka September)
Xilli ciyaareedka cusub ee Champions League waxaa lagu furayaa kulamo xiiso leh. Tababare Unai Emry ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee Champions League hogaamin doona PSG marka ay wajahayaan Arsene Wenger. Lucas Perez ayaa ku soo bilaaban kara kulankiisii ugu horeeyay ee Yurub. Kulankan waa mid dejin doona Group-ka Champions League ee ay labadan kooxood ka soo jeedaan.
Juventus vs Sevilla (Arbaca, 14ka Septmeber)
Kooxda Jorge Sampaoli ee Sevilla waxa ay u hayaami doontaa Juventus iyagoo wajahaya kooxda heysata horyaalka Serie A oo sidoo kale doonaya inay noqdaan boqorada Yurub. Paul Pogba iyo Alvaro Morata ayaa ka tagay Bianconeri laakiin waxa ay isku adkeeyaan Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Medhi Benatia iyo Dani Alves. Kooxda reer Spain ayaa sidoo kale dooneysa inay ku ifto masraxa ugu weyn iyagoo heysta ciyaartoy sida Samir Nasri, Franco Vazquez, Pablo Sarabia, Paulo Ganso iyo Luciano Viettto.
Chelsea vs Liverpool (Jimcaha, 16ka September)
Si ka duwan sidii hore xilli ciyaareedkan Premier League waxaa la ciyaarayaa habeenka Jimcaha, waxaana isku balansan kulanka la wada sugayo inay iska horyimaadaan tababarayaasha xamaasadda leh ee Antonio Conte iyo Jurgen Klopp. Midkoodna Chelsea iyo Liverpool xilli ciyaareedkan kama qeyb qaadanayaan tartamada Yurub waana sababta loo bedelay taariikhda kulanka weyn ee ka dhacaya Stamford Bridge Stadium.
Inter Milan vs Juventus (Axad, 18ka September)
Kulankan xamaasadda leh ayaa la ciyaarayaa iyadoo xilli ciyaareedka uu bilow yahay waana kulanka afaraad ee xilli ciyaareedka. Tababare Frank de Boer ayaa wajihi doonaa tijaabadiisii ugu adkeyd ee tan iyo markii uu qabtay Nerazzurri. Joao Miranda, Mauro Icardi iyo Ivan Perisic waa ay garanayaan durbaba waxa ay ka filan karaan Bianconeri, waxaana kula biiraya xiddigaha cusub Joao Mario, Antonio Candreva iyo Ever Banega.
Barcelona vs Atletico Madrid (Arbaca, 21ka September)
Mid ka mid ah kulamadda ugu fiican ee xilli ciyaareed kasta oo La Liga ah. Kooxdii horyaalka hanatay 2014 oo ka hor imaneysa kooxdii horyaalka xajisatay 2015 iyo 2016. MSN ayaa ka hor imanaya Jan Oblak iyo Diego Godin. Saul, Koke iyo Gabi ayaa isku dayi doona inay celiyaan Andres Iniesta, Sergio Busquets iyo Ivan Rakitic. Antoine Griezmann iyo Kevin Gameiro ayaa tijaabin doona Marc-Andre ter Stegen. Waa ku celiska wareegii 8-da ee Champions League ee xilli ciyaareedkii hore markaas oo Rojiblancos ay reebtay Barcelona.
Man United vs Leicester (Sabti, 24ka September)
Kooxda horyaalka difaacaneysa ayaa booqan doonta Old Trafford iyagoo isku dayaya inay aar-gutaan guul-darradii kulankii Community Shield. Ranieri ayaa waxaa ku adkaan doonta inuu ciyaartoydiisa ka dhaadhiciyo kulankan xilli ay ku riyoonayaan ka ciyaarista Champions League. Wakhtiga kulankan la ciyaarayo Man United waxa ay durbaba la ciyaartay Europa League kooxda Feyenoord.
Borussia Dortmund vs Real Madrid (Salaasa, 27ka September)
Kooxda Real Madrid ayaa ku laabaneysa garoon ay si weyn u barteen sannadihii u danbeeyay Signal Iduna Park. Waa halkii uu Mourinho ku macasalaameeyay riyadiisii Champions League ee Real Madrid waxaana u sabab ahaa Robert Lewandowski, waana sidoo kale meeshii lagu dhisay riyadii La Decima kadib wacdarro uu dhigay Casemiro. Kulankan ayaa go’aansan kara cida kaalinta koowaad ku dhammeysanaysa Group-ka.
Atletico Madrid vs Bayern Munchen (Arbaca, 28ka September)
Kulankii Semi Finalka ee Champions League ee bishii April Saul ayaa isku bedelay Diego Maradona, sidoo kalena Griezmann iyo Jan Oblak ayaa sii nooleeyay rajadooda garoonka Allianz Arena, iyadoo Atletico ay gaadhay Finalka. Wakhtigan waxaa Bayern tababare u ah Carlo Ancelotti oo ah tababarihii Atletico ku garaacay Finalkii Lisbon 2014.